Ọzọ Size Wide Leg Loose N'ozuzu
Agba aja aja / L Agba agba / XL Beige / XXL Beige / XXXL Beige / 4XL Beige / 5XL Navy / L Navy / XL Navy / XXL Navy / XXXL Navy / 4XL Navy / 5XL Black / L Black / XL Black / XXL Black / XXXL Black / 4XL Black / 5XL
Nke a na-emekarị nhọrọ zuru oke maka nwanyị ọ bụla nke nwere mmasị ibi ndụ ya na nkasi obi ma na-adịgide dịka o kwere mee. Na-ejikọta ikike nkasi obi na ejiji nke ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla, ọ ga-abụrịrị ndị inyom na-emepụta ihe. Na ejiji ya, o doro anya na ị ga-aga-nhọrọ maka ihe ndị ahụ na ebe ịchọrọ ịga ụdị na nkasi obi.
ECHICHE: Ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ na-eme ka ahụ dị gị mma ma dị mma maka ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ. N'ikwekọ na ụzọ rụrụ arụ, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-agagharị na klas ahụ ma nkasi obi ka ị na-eyi nke a jumpsuit. Ndị a jikọtara iji jide n'aka na ị nwere ike ịgafe ụbọchị gị n'emebughị nchegbu banyere mgbanwe ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ dị ka ụzọ rụrụ arụ na-enye ahụ gị ọtụtụ ebe iku ume.
IHE: Na-abata na agba chaa chaa, ọ na-enye oghere dị nfe nke ị nwere ike ịnwale ụdị ụdị na ụdị dị iche iche na-enweghị ihe ọ bụla. Ngwunye zuru oke na-abịa n'ọtụtụ dịgasị iche gụnyere L, XL, 2XL, 3Xl, 4XL, na 5XL iji hụ na ịchọta ụda kwesịrị ekwesị maka ọdịdị ahụ na ọdịdị gị. Tinye ihe ndị a niile ọnụ na ị nwere uwe nke ị ga-ejide n'aka na ịghaghachi uru maka ego gị.